सानो बोतल खाना पकाउने तेल भर्ने र क्यापिङ लेबलिङ मेसिन - Npoat.com
तेल5लिटर बोतल भर्ने मेसिन, सानो बोतल खाना पकाउने तेल भर्ने र क्यापिंग लेबलिंग मेसिन
यो खाद्य तेल भर्ने मेसिन तेल भर्नको लागि उपयुक्त छ। यो जाम, सिरप, टमाटर सस, मह आदि जस्ता चिपचिपा तरल पदार्थहरूको लागि पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
को पिस्टन भरिने मेसिन फिलिंग लाइनसँग जडान गर्न सकिन्छ, र मुख्यतया चिपचिपापन तरल पदार्थहरूको लागि उपयुक्त। यसले PLC, एक फोटोइलेक्ट्रिक स्विच, टच स्क्रिन र उच्च गुणस्तरको स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक पार्ट्स जस्ता उच्च गुणस्तरको विद्युतीय घटकहरू प्रयोग गरी एकीकृत डिजाइन अपनाएको छ। यो मेसिन राम्रो गुणस्तरको छ। प्रणाली सञ्चालन, सुविधाजनक समायोजन, मैत्री म्यान-मेशिन इन्टरफेस, उन्नत स्वचालित नियन्त्रण प्रविधिको प्रयोग, उच्च परिशुद्धता तरल भरण प्राप्त गर्न।
त्यहाँ तलका फाइदाहरू छन्:
क 100-5000ml बाट ठूलो भर्ने स्कोप। यदि तपाईंलाई 5L भन्दा ठूलो भोल्युम चाहिन्छ भने, हामी यसलाई पनि बनाउन सक्छौं।
b ±0.5 ml को उच्च भरिने परिशुद्धता संग
ग भरिने भोल्युम वास्तविक मापन द्वारा विनियमित छ, र यो डिजिटल PLC डिस्प्ले नियन्त्रण हो।
d सञ्चालन गर्न सरल, कम लागत संग मर्मत गर्न सजिलो।
e फिलरहरूसँग कुनै बोतल छैन भरिने प्रणाली छैन। फिलरसँग ड्रप कन्ट्रोल प्रणाली छ जसले कुनै पनि तेल चुहावटलाई जोगाउँछ।
f बल स्क्रू पोस्ट को स्थिर लिफ्टिंग।
g बोतल मुख स्थिति उपकरण भरिने भल्भ को कुनै विचलन सुनिश्चित गर्दछ।
h म्यानुअल हस्तक्षेप बिना, स्वचालित रूपमा भित्र वा बाहिर तरल।
भर्ने दायरा: 100-5000ml
आउटपुट: 1200 बोतल प्रति घण्टा
मापन सटीक: 99.8%
लागू बोतल व्यास: 40-100mm
लागू बोतल उचाइ।: 70-300mm
हावाको चाप: ०.६-०.८ एमपीए
बिजुली: AC380V, तीन चरण
उत्पादनको समयमा: हामी क्रेतालाई सहयोग पुर्‍याउँछौं र मैन्युफैक्चरिंग प्रकृया र खरिदकर्तालाई स्थिति अपडेट गर्छौं, र हामी हाम्रो कारखानामा सामान समाप्त भएपछि मेशिनको परीक्षण गर्न आउनेवालालाई आमन्त्रित गर्नेछौं, यदि खरीददारले यो ठीक छ भनेर सोच्दछ भने, हामी शिपिंगको व्यवस्था गर्नेछौं; वा हामी परीक्षण भिडियो लिन र खरीददारलाई पठाउन सक्दछौं, उद्देश्य यो छ कि खरिदकर्ताले मेशिनको निरीक्षण गर्न सक्दछ।
बेचे पछि: हामी प्राविधिकहरूलाई विदेश, कमिसन, र अपरेटर प्रशिक्षण पठाउनेछौं; हाम्रो वारेन्टी अवधि १२ महिना हो, यस अवधिमा हामी क्रेताका लागि नि: शुल्क भागहरू प्रदान गर्दछौं र आवश्यक टेक्निकल समर्थन पनि प्रदान गर्दछौं। वारेन्टी अवधि भन्दा बाहिर, हामी नि: शुल्क टेक्निकल समर्थन, र स्पेयर पार्ट्सको लागत मूल्य प्रस्ताव गर्दछौं।
१. हामी तपाईंलाई चलिरहेको मेसिनको भिडियो पठाउन सक्दछौं।
2. तपाईलाई हाम्रो कम्पनी भ्रमण गर्न आउन स्वागत छ, र हाम्रो कारखानामा चलिरहेको मेसिन हेर्नुहोस्, हामी तपाईलाई हाम्रो शहर नजिकैको स्टेशनबाट उठाउन सक्छौं।
3. यदि हामीले हामीबाट मेसिनहरू ल्याएका ग्राहकको अनुमति पायौं भने, हामी तपाईंलाई हाम्रा ग्राहकहरूको सम्पर्क जानकारी बताउन सक्छौं, तपाईं तिनीहरूको कारखाना भ्रमण गर्न जान सक्नुहुन्छ।
1. हामी तपाईंको आवश्यकताहरू (सामग्री, शक्ति, भरिने प्रकार, बोतलहरूको प्रकार, र यस्तै अन्य) अनुसार मेसिनहरू डिजाइन गर्न सक्छौं, एकै समयमा हामी तपाईंलाई हाम्रो व्यावसायिक सुझाव दिनेछौं, तपाईंलाई थाहा छ, हामी यसमा छौं। धेरै वर्षको लागि उद्योग।
2. हामी निःशुल्क प्राविधिक समर्थन र परामर्श प्रदान गर्न सक्छौं जस्तै तपाईंको कारखाना डिजाइन, कारखाना लेआउट र यस्तै।